Amathiphu okuqala ku-Enduro MTB Cycling - ULLER
Uma unentshisekelo yokuhamba ngebhayisikili, futhi usuvele uchwepheshe walokho okufanele ukwenze i-bicicleta ikhathazekile, le ndatshana ingeyakho.
Omunye wemidlalo osethole udumo olukhulu ezikhathini zakamuva ngebhayisikili, futhi lokhu kungenzeka kungenxa enkulu yesidingo sokwenzelwa ngaphandle. Kodwa-ke, okungaziwa ngabantu abaningi ukuthi, kulo mkhuba, kunezindlela ezahlukahlukene, ezinjengebhayisikili lomgwaqo, ezaziwa kakhulu ngemincintiswano efana neTour de France noma iGiro d'Italia, iBMX noma intaba yokuhamba ngebhayisikili noma ukuhamba ngebhayisikili. , nokuthi ngaphakathi kwayo kukhona ezinye ezifana neXC (cross country), iTrail noma i- Enduro MBT, esikutshela ngakho maqondana nalokhu futhi sikunikeza okhiye abathile ukuze uqale kulesi sigaba futhi ungafi uzama.
Uma okuthandayo kuyi-adrenaline, lena umdlalo wakho. I- I-Enduro Cycling MBT wazalwa ngo-1976 eCalifornia, e-United States, ngenxa yeqembu labangane abajabule ngokuncintisana ukubona ukuthi ngubani ohla intaba ngokushesha. Namuhla kusenjalo, kodwa ngendlela eguqukile; Akuyona into engaqondakali ukuthi kubizwe kanjalo, empeleni, kuvela ukukhuthazela esiNgisini okusho ukubekezela, njengoba lo mdlalo ususelwa emincintiswaneni yamabhayisikili ezindaweni zangasese ze Yonke Intaba futhi imizila kabani ihlukaniswe ngezigaba ezingahlala phakathi kwemizuzu emi-2 nengama-20; umncintiswano ophelele ungaba phakathi kuka-10 no-50 km. Le ndlela yokuziphatha inokubaluleka kokugxila kakhulu ekuthokozeleni ama-descents, okufana naleli phuzu ngokuhamba ngebhayisikili ekwehleni, ngakho-ke kuvamile kakhulu ukuthi izizinda eziningi zibe nebanga elifanayo nelama-ascents.
Lapho uncintisana I-Enduro Kufanele ukhumbule ukuthi bayimincintiswano enesikhathi (ama-descents kuphela) lapho umzila waziwa khona kusasele amasonto ambalwa ngaphambi kwalokho, kepha, njengombangi ongaqhudelana naye ungaya kuphela uphinde ubuke leyo ndawo ngesonto eledlule, vele, kuthiwani, uma umangele engxenyeni ethile obungayazi, ungaqedwa.
Ukwenza noma yimuphi umdlalo ngendlela efanele nangokuphepha okuphezulu udinga ukwazi eminye imininingwane ezokwenza isipiliyoni sakho sanelise ngokwengeziwe, futhi lapha sikutshela ngaso.
Ifomu lomzimba langaphambilini
Into yokuqala okufanele uyazi ukuthi i-enduro ayenzelwanga wonke umuntu, kungaphezu kokululeka ukuthi ube nolwazi lwangaphambilini mayelana nokuphathwa kwebhayisikili lasezintabeni futhi ube nomthamo omuhle womzimba wangaphambilini ngoba amandla amaningi asetshenziselwa ukukhuphuka futhi kukhona ukugqoka okuhle kwemisipha komzimba ongenhla kuma-descents, ngaphezu kwalokho ukumelana kubalulekile ukwenza izinhlanga.
Khumbula ukuthi imizila ye-enduro yinde impela nokuthi uzogibela amahora amaningi ngebhayisikili, kungcono ukuthi uphume emizileni emide ukuze uziqeqeshe futhi ngaleyo ndlela wandise amandla akho e-aerobic. Ungaziqeqesha nasezivocavoca umzimba futhi ngaleyo ndlela uthuthukise amandla akho, uzodinga ukuba nomzimba oqinile ophezulu nemilenze ukuze ukwazi ukulawula ibhayisikili lakho ngempumelelo. Vele, kwenze ngokuqapha!
Ibhayisikili lezintaba, kepha ikakhulukazi i-enduro!
I-geometry ye- Amabhayisikili we-MTB enduro inolaka kakhulu kunabanye. Kususelwa ekubeni isikhathi eside kakhulu ukubamba kangcono indawo nokuthi lokhu kutholakale ukuzinza okwanele, ikakhulukazi lapho kwehla intaba ngejubane eliphakeme kakhulu, inhloso enkulu ukuthi ukweqa kumiswe ngendlela engcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, maqondana naleli bhayisikili, kufanele wazi ukuthi linephutha elithe xaxa nokuthi ukusetshenziswa kwesihlalo sobukhosi setelescopic, esaziwa kakhulu njenge-posh seatpost, kubalulekile ukwaba kabusha isisindo somzimba usohambweni futhi ukwazi ukulawula ukuphakama kwesihlalo njengoba kufanele kuma-ascents nakuma-descents.
Okokugcina, kufanele wazi ukuthi iphedali evame ukusetshenziswa kulesi simiso yipulatifomu ejwayelekile, ngoba ikuvumela ukuthi ususe unyawo lwakho ngokushesha futhi ulusekele phansi ezimeni ezibeka engozini.
Ukuthola i- ibhayisikili le-enduro, okuhle kakhulu ukuthi uya ezitolo ezikhethekile lapho ukunakwa kucace khona futhi bazi kahle ukuthi ufunani. Uma ngabe kungokokuqala ngqa, into enhle ukuthi uzivumele ululekwe hhayi ukuthi uqhutshwe ngamanani ashibhile ongawathola ezitolo ezinkulu.
Isigqoko sokuzivikela se-MBT, ukhiye wakho konke
Yize ungathokozi njengokuthenga eyakho yokuqala ibhayisikili le-enduro, kubalulekile ukuthi wazi nokuthi ungayikhetha kanjani ifayili le- isigqoko se-enduro Kwesokudla. Khumbula ukuthi ukuvikela ikhanda lakho kufanele kube yinto ephambili. Ngenxa yalesi sizathu, gwema izigqoko zokuzivikela ezishibhile ezinekhwalithi esolekayo; ukuze enduroImvamisa zimboza kakhulu futhi ngenxa yalokho ziyasinda, zingenisa umoya omncane, futhi izikhathi eziningi kufanele zihlangane, uma kwenzeka umncintiswano ukufuna ngokusobala.
Yiba nokunye izibuko ze-enduro Kubalulekile futhi, ikakhulukazi okuvala amehlo akho kahle nokulingana nesigqoko sokuzivikela, ngoba lolu hlobo lwe Ukuhamba ngebhayisikili kwe-MTB ikuvezela ezintabeni, emithambekeni nasekuweni okungenzeka kube khona Kusuka ku-Uller sincoma izingilazi zethu zezemidlalo, IWall Red / Mnyama . Lolu hlobo lwezibuko lune- ibhande lokulwa nesiliphu evumela ukuthi izingilazi zakho zihlale zixhunywe kwisigqoko sokuzivikela.
Ku- enduro izinguboKhumbula njalo ukuthi uzophuma uyokwenza ezemidlalo amahora, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uzizwe ukhululekile ngaso sonke isikhathi. Khohlwa ngamajean noma izikibha zikakotini, okudingayo yizingubo eziphefumulayo nezoma ngokushesha. Okuhle kakhulu ukuthi uyazi umzila ngaphambi kokuphuma futhi ngaleyo ndlela ukhethe kangcono izingubo ozozidinga; Akufani nokuthi uphuma uhamba ngeenyawo ehlobo kunasebusika, noma emgwaqeni oyisicaba othi, ngenxa yelinye eligcwele amatshe, kuleso simo ukushuba kwamabhulukwe kufanele kwehluke, kepha njalo kuqinisekisa ukungena komoya.
Zama njalo ukuphuma nenkampani
Qaphela lapho uhamba ngonyawo, ngaso sonke isikhathi kungcono ukukwenza uphelezelwa othile noma okungenani emigwaqeni nasezindleleni ezihanjwa nangabanye abagibeli bamabhayisikili, kungenzeka ukuthi uma ungumuntu osemusha ungathola ukuwa futhi uma udinga usizo, kulolu hlobo lwemizila kungenzeka ukuthi ungayithola. Ngaphezu kwalokho, ukuthandana nabanye abanolwazi oluningi kunawe kuzokusiza ukuthi uthuthukise inqubo yakho bese ukopisha amasu amahle kakhulu kubo.
Landela indlela yemizila yemvelo
Yize kubonakala kusobala, abaningi abakwenzi, bekwazi ukuzibeka engozini. Qiniseka ukuthi wehla ngemizila eyenzelwe ama-descents, futhi ngokufanayo kuma-ascents, ngakho-ke uzogwema noma yiluphi uhlobo lokwesaba futhi uzoziqeqeshela kangcono ubuqhawe bakho.
Yidla kahle: ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwalokho!
Ukudla neziphuzo nakho kubalulekile, noma ngabe ugxile kakhulu ekwenzeni umzila wakho, ungakhohlwa ukuthi kufanele uhlale unamanzi amaningi, ukuthatha iziphuzo kubalulekile ekusebenzeni kwakho nokuthi ukwazi ukufeza izinhloso zakho ngaphandle kwenkinga. Ngokuqondene nokudla, ungathatha ukudla okulula njengamabha kagesi nezithelo ezithile bese uthola amandla athe xaxa. Ukusebenzisa amaprotheni nama-carbohydrate kuzokwenza umehluko endleleni obhekana ngayo nomncintiswano.
Uma uzohamba ngomzila, ungafaki isandla ekungcolisweni kwemvelo, ngaphambi kokushiya indawo, qiniseka ukuthi uthatha yonke imfucuza nodoti owukhiqizile.
Ungakhohlwa ukuthi uqhuba umdlalo nokuthi into ebaluleke kakhulu ukuthi ujabulele ukuwenza. Musa ukuncintisana ngokweqile futhi ungacindezeli abanye ukuthi bakuvumele udlule noma uhambe ngokushesha, ngaphandle uma usemncintiswaneni ocacile!
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana ne-MBT enduro cycling
Ayini amabhayisikili e-enduro?
I-Las amabhayisikili e-enduro Imvamisa ziba nohambo olubanzi lokumiswa, okungukuthi, imigoqo ebhekele ukumunca imithelela yamasondo angaphambili isilinganiso esiphakathi kuka-160mm no-180mm. Ngaphezu kokuba namasondo nezikopelo ezibanzi, lolu hlobo lwebhayisikili lunendawo yokubeka iteleskopu ekuvumela ukuthi ulungise isihlalo sendlela, okwenza kube lula ukunyuka naphezulu.
Uyini umehluko phakathi kwebhayisikili le-Enduro nebhayisikili ekwehleni?
I-Las amabhayisikili e-enduro aklanyelwe ukwehla nokwehla kwezintaba, noma kuzo zonke izinhlobo zezwe. Ngenkathi i- amabhayisikili okwehla, zilula futhi zenzelwe kuphela ukwehla okude.
Unjani isifunda se-enduro?
Isifunda se-enduro siqukethe izigaba ezinesikhathi: Ukwehla nokwehla. Ukukhuphuka, kubizwa ngokuthi izixhumanisi futhi njengasezindlini, kufanele kufezwe ngesikhathi esifushane kakhulu. Lezi zigaba ezikhethekile zinezimo ezinzima zomhlaba futhi abagibeli banethuba lokuziqeqesha kanye kuphela, futhi kulapho badinga ukuthola umugqa ozobavumela ukuba babeke isikhathi sabo esihle kakhulu ngesikhathi somncintiswano. Abasubathi kumele babe sesimweni esihle ngokomzimba kusukela kulezi zivivinyo, ngokungafani ne- ekwehleniAzihlali ngqo imizuzu eyi-5, imvamisa zihlala imizuzu engama-60, ezisatshalaliswa usuku lonke lomncintiswano!
Yimiphi imincintiswano ye-Enduro edume kakhulu eSpain?
I-Spanish Enduro Open
Indebe ye-Catalan Enduro
ISpanish Enduro Championship